Muhiimada ay leedahay inaad ogaato sida loola doodo lamaanahaaga | Bezzia
Muhiimada ay leedahay inaad ogaato sida loola doodo lamaanahaaga
Maria Jose Roldan | | Xiriirka
Wax kasta oo ku xeeran lammaanaha iyo noloshoodu waa mid adag oo adag. Inkasta oo jacaylku jiro, habka fekerka ee labada qof ayaa noqon kara mid kala duwan, abuurista khilaafyo kala duwan. Muranka lamaanaha ah ee laga baqayo maaha inay muujiyaan inay wax khaldan yihiin.
Furaha wax walba waa in la helo dheelitirnaan gaar ah taas wanaagga la sugayo ee lamaanaha dhexdooda.
1 Dhibaatooyinka nolosha lamaanaha
2 Muhiimada ay leedahay inaad ogaato sida loola doodo lamaanahaaga
Dhibaatooyinka nolosha lamaanaha
Inta badan lamaanaha aan wada shaqayn ee kala taga waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah. sida uu yahay kibirka qolo ka mid ah iyo Ego xad dhaaf ah oo aan waxba soo kordhinayn. Kibirku wuxuu ku dhamaadaa inuu lamaanayaasha waxyeello u geysto dhammaan waxyaalihii xunxun ee tani u horseedayso mustaqbalka wanaagsan ee xiriirka.
Marka laga hadlayo doodaha iyo khilaafka, waxaa lagama maarmaan ah in la gaaro heshiis faa'iido u leh labada dhinac ee xiriirka ka dhexeeya. Haddii aan heshiis noocaas ah la gaarin. Waa wax iska caadi ah in mustaqbalka fog xiriirka aan kor ku soo sheegnay uu xumaado oo uu halis ugu jiro in uu burburo. La doodida lamaanahaaga wakhti kasta waxay ku dabooshaa ilaa heer wax kastaa aanay macno lahayn.
Muranka iyo isku dhacyadu waa qayb ka mid ah maalinba maalinta ka dambaysa nooc kasta oo xidhiidh ah, sidaas darteed looma baahna in laga cararo. Dagaalada ka dhex dhaca labada lamaane waa in ay caawiyaan lamaanaha si ay u koraan oo ay u sii xoogaystaan. Si uu khilaafku u noqdo mid wax dhisa oo u wanaagsan lammaanaha, waxa loo baahan yahay in la raaco tillaabooyin dhawr ah.
Waa inay caddahay in lammaanuhu aanu ahayn qof doonaya inuu ku xumeeyo. Waa qof ku jecel oo ku jecel. Jacaylku waa inuusan lumin oo si buuxda u joogo.
Marka ay timaado in heshiis laga gaaro wadahadalada suurtagalka ah ee lammaanahaaga, ogaanshaha sida aad naftaada u geliso qofka kale waa lama huraan. Waa inaad ogaataa sida loo naxariisto oo loo fahmo dareenka lammaanaha si looga hortago in dagaaladu sii kordhaan.
Looma baahna in qofka kale la eedeeyo mar walba. Waa lama huraan in la qaado mas'uuliyadda falalka lagu kacay iyo u muuji waxyaabaha kala duwan marka laga eego dhinaca qofka.
Dagaalka iyo wada xaajoodka lamaanaha waa in lagu sameeyaa luuqad aan afka ahayn oo ku haboon mar kasta. Waa inaad is dejiso oo aad nasato mar kasta mar haddii labada qof aanay col ahayn.
Isku soo wada duuboo, ma dhacayso in qof la murmo ama lala dagaalamo, haddii ujeedadu tahay in xal loo helo colaadda iyo iska ilaali mar walba in aadan lumin warqado. Ma xuma in mansab kasta la difaaco, marba haddii laga tagay kibirka iyo rabitaanka saxnaanta mar kasta. Jacaylku sidoo kale waa inuusan lumin oo uu joogo waqti kasta si loo xasuusto in xiriirku ka sarreeyo wax walba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Muhiimada ay leedahay inaad ogaato sida loola doodo lamaanahaaga
Bariis la dubay oo toon duban lagu dubay iyo kalluun monk
Fadhiyada qaloocan, oo ah isbeddel lagu qurxiyo qolka fadhiga